संसद् अनुभव : सिंहदरबार र संसद् भवनभित्र चर्को असमानता र विभेद छ
रुक्मिणी चौधरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष हुन् । थारु समुदायबाट राजनीतिमा आएकी उनी प्रष्ट बोल्ने युवानेताको रुपमा चर्चित छिन् । पहिले र अहिलेको दुवै संविधानसभामा सहभागी चौधरीले ठूला दल र साना दलको नाममा संसदमा हुने गरेको विभेदको बारेमा रातोपाटीकर्मी आस्था केसीसँग गरेको कुराकानीको सङ्क्षेप । राजनीतिलाई मैल..
एमाले युवा नेता ठाकुर गैरे पार्टीभित्र र बाहिर चर्चित छन् । विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्ट..
संसद्को ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन तयारी..
महिला अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारीको प्रश्न : इच्छा, स्वीकृति र विभेद बिनाको सम्बन्धमा टाउको दुखाई किन ?
डा.रेणु राजभण्डारी बेचविखन तथा ओसारपसार, घरेलु हिंसा र यौन हिंसामा परेका महिलालाई समाजमा प..
नयाँ शक्ति नेपालमा बाबुरामपछि सबैभन्दा परिचित र संगठनमा पकड राख्ने नेतामा पर्छन्– देवेन्द्..
खिया लागेको नेविसंघमा स्पात भर्न मेरो दाबेदारी : नैनसिंह महर
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबी गरिरहेका नैनसिंह महर प्रखर वक्ता र नैतिकताको राजनीति गर्ने विद्यार्थी नेतामा पर्छन् । महर नेविसंघमा प्रदीप पौडेल अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्ष थिए । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा जन्मिएर क्षेत्र, जिल्ला हँुदै नेविसंघ केन्द्रमा पुगेका महर पत्रकार र लेखक पनि हुन् । उनले नेविस..
नाति पुस्ताका पत्रकारसमेत किशोर नेपाललाई ‘किशोर दाइ’ भनी सहजै सम्बोधन गर्छन् । किशोर दाइचाहिँ धेरैलाई ‘तिमी’ वा ‘तँ’ भन्छन् । केही महिनाअघि एक अनलाइन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘मैले तिमी भनेँ भने दाइले टाढाको सम्झ्यो भनी रिसाउँछन् ।’ पत्रकारितामा नयाँ पुस्तासँग घुलमिल हुने अवसर किशोर नेपालबाहेक कसैलाई मिलेको छैन । ‘किशोर दा..
ओली सरकार ढल्नुमा बाह्य शक्तिको प्रभाव कति ? (बालकृष्ण खाँडसँग विशेष कुराकानी)
ओली सरकार गठन भएदेखि नै काङ्ग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको हो । तर प्रशासनिक हिसाबले पनि सरकार चलेको जस्तो देखिएन । एकातिर महगी बढेर आकाश छोएको छ अर्कोतिर जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु समेत सहज उपलब्ध हुन सकेको स्थिति छैन । चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम खासै गरेको देखिन्न तर सरकारले आर्थिक मनमर्जी गरेको छ । […]
साताको एजेन्डा : समर्थन फिर्ता लिनुमा कसको मुख्य हात ? (एमाले महासचिव पोखरेलसँग विशेष कुराकानी)
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट रहेर सत्ता समीकरण बचाउमा लागेका नेता हुन् । गत वैशाख अन्तिम साता ‘कोमा’ बाट फर्केको एमाले नेतृत्वको सरकार असार मसान्त नाघ्न सक्नेमा द्विविधा छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी माओवादी केन्द्र भने कांग्रेससँग मिलेर नयाँ समीकरणमा लागेको छ । अर्थात् एमालेसँगको स..
पञ्चायतकालको स्नातक चुनावदेखि राजनीतिमा लागेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पटक–पटक अर्थमन्त्री बने । अमेरिकाबाट पीएचडी लोहनी आर्थिक मामिलाविज्ञ पनि हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. लोहनीसँग उनको प्रेम, मदिरा, सम्पत्ति, राजनीतिलगायत जीवनका अनेक पक्षबारे रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको अंश : मेरो पोसाक घरमा बस्दा क्या..
९ लाख सवारीलाई हातले व्यवस्थापन गर्ने काम गिनिज बुकमा लेखिनुपर्ने : ट्राफिक प्रहरी प्रमुख
सडक दुर्घटनाको स्थिति हेर्ने हो भने नेपालमै यसको रेसियो ज्यादै छ । २०१४ को डाटा हेर्ने हो भने हामीकहाँ प्रतिलाख २२ जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ । यही रेसियो सिंगापुरमा ३ को हाराहारीमा छ । आइल्याडमा ४ को हाराहारीमा छ । स्वेडेन र स्विट्जरल्यान्डमा २ दशमलव ८ को हाराहारीमा छ । जब कि ती देशमा हाम्राभन्दा […]
राजेन्द्र महतोको सूत्र : यसरी हुन्छ राष्ट्रिय सहमति
‘चियाको प्यालामा तुफान’जस्तै यहाँको राजनीतिक बजारमा पनि आँधी तुफान आएको देखिन्छ । सरकार बनाउने, खसाउने, राख्ने नराख्ने यस्ता खेलहरु राजनीतिक बजारमा भइरहन्छन् । राजनीतिमा ठूला भनिएका दलहरुबाट सच्चाइभन्दा पनि झुटको खेती बढी नै भएको छ । वास्तवमा सञ्चार माध्यममा जसरी सरकार परिवर्तनको विषय बाहिर आएका छन् । राजनीतिक दलहरु त्यही गतिमा ..
सरकार फेर्नुस् भन्न हामी गएका छैनौँ, प्रचण्डजीलाई सोध्दा पनि हुन्छ : रमेश लेखक
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दोस्रोपटक नयाँ सत्ता समीकरण अभ्यासमा छन् । नयाँ सरकार नेतृत्वको चाहना भने कांग्रेसले बढी देखाएको छ । यसका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले सरकार गठबन्धनकै मुख्य घटक माओवादीसँग आन्तरिक छलफल गर्दै आएको छ । रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँडलगायत कांग्रेस नेता यो प्रक्रियामा सक्रिय द..
एमाले सचेतकको प्रश्न : बहुमतीय सरकार नै बनाउने हो भने किन यो सरकार विघटन गर्नुपर्‍यो ?
नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समग्र विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरकार परिवर्तनको कुराले मिसनअनुसार काम गर्ने विषयमा अवरोध ल्याएको छ । त्यसैले पटक पटक यो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु राष्ट्रका लागि राम्रो विषय होइन भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकार निमार्णका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो सरकार नौ महिना, दस महिना वा कुनै नि..
१६ सय बालबालिकालाई जेलबाट उद्धार गरी नयाँ जीवन
एउटी आमाले बच्चा हराइन् भने कस्तो अवस्थामा पुग्लिन् ? अथवा बच्चा आमाबुवासँग विछोडिएमा सम्बन्धित अभिभावक कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रेलान् ? यस्तै सोचेर मैले त्यस्ता बालबच्चासँगै जीवन बिताउने निधो गरेँ, जो आमाबुवासँग विछोडिएका छन् । उल्लिखित भनाइ समाजसेवी इन्दिरा रानामगर (४६) को हो । रानामगरले २२ वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा जेल परेर कैद..
एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा कुशल ब्याडमिन्टन खेलाडी पनि हुन् । राजनीतिक सफलता पाउनुपछाडि आफ्नो खेल जीवनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थापाको बुझाइ छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा उद्योगमन्त्री बनेका थापा हरेक बिहान दुई घन्टा खेल्छन् । उनको जीवनका रोचक र रहस्यमय प्रसंगबारे रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको अन्तर्वार्ताको ..
अनशनले अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ : कार्यकारी निर्देशक, टिचिङ अस्पताल
डा. गोविन्द केसीले सुरुको दिनमा टिचिङ अस्पताल र इन्स्टिच्युटभित्रका समस्या दर्साउँदै सुधारका विषयमा सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । जहाँसम्म त्यसमा धेरैको साथ समर्थन रहेको देखिन्थ्यो । उहाँले उठाएका विषयहरु अस्पतालको सुधारका लागि थिए । तीमध्ये केही सुधार पनि भएका छन् । एमबीबीएस पठन पाठनमा निजी कलेजको शुल्क निर्धारण, वार्षिक सिट सङ..
टिप्पणी :नयाँ शक्तिमा अन्तरविरोधको के हुन्छ असर ?
काठमाडौं– पार्टी स्थापना घोषणासभापछि जेठ ३१ र ३२ सम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ शक्तिको अन्तरिम विधान पारित गर्यो । यो विधानले एक बर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने र हाललाई पार्टीको संयोजक मात्र रहने व्यवस्था गर्यो । पछि दस्तावेज परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलको धुलिखेल वैठकले विधानलाई नै अन्तिम रुप दियो जहाँ, आबश्यक सख्याँमा सहसंयोजक रह..
सरकारको संकट : किन बढ्यो माओवादी एमाले टकराव ?
अहिलेको सरकार गठनको आधार भनेको संविधान निर्माण गर्नेमा भएको सहमती हो । संविधान निर्माणमा काम गर्नु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो । एमालेले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिन आँटेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले र एमाले नेताहरुलाई भेटेर समर्थन फिर्ता नलिनुस्, संविधान बनाउनमा सहमती गरौं र संवि..
एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका नजरमा नक्कली चिकित्सक
कुनै एउटा बिरामीका लागि साक्षात् भगवान मानिने चिकित्सकहरु पनि नक्कली भेटिन थालेपछि यतिबेला चिकित्सा क्षेत्र एकाएक तात्न थालेको छ । कडा मिहिनेत र साधनाबाट चिकित्सकीय ज्ञान हासिल गरी बिरामीको सारथि बन्ने चिकित्सकहरु नै नक्कली प्रमाणपत्रको अरोपमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा अनेकौँ सवाल उठिरहेकका छन् । यो स्वाभाविक चिन्ता..
साताको एजेन्डा : संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई किन हुँदैन कारबाही ?
नयाँ संविधानको जगमा बनेको वर्तमान सरकारका केही मन्त्री पछिल्लो समय संविधानविरोधी आन्दोलनमा सामेल छन् । उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी, विजयकुमार गच्छदार, कमल थापालगायतले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्तिमात्रै दिएका छैनन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै छन् । मन्त्रीहरू नै आन्दोलनमा लागेपछि सरकारको भविस्य कस्तो हुनेछ ? सरकार कत्तिको क..
हिजो सहमतीका साथ राष्ट्रलाई संविधान दिने काम भयो र सहमतीबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी थियौँ । रातारात काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी दिएर सहमतीको यात्रामा अवरोधको शृङ्खलाको सुरुवात गरेको हो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिनै लागेको थियो त्यति न..
कांग्रेस नेता एव्म पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत आर्थिक मामिलाका जानकार ‘एकेडेमिसियन’ पनि हुन् । २०४७ साललगत्तै राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि अमेरिकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिरे थिए उनी । गीत–संगीत, चलचित्र, खेलकुदलगायत जीवनका रोचक पक्षबारे रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको अंश : मेरो घुमफिर घुमफिरमा रुचि छ मेरो । द..
नक्कली डाक्टर कि नक्कली प्रमाणपत्र ?
सञ्चारमाध्यममा नक्कली चिकित्सकका खबरको बिगबिगीले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । फुटपाथदेखि रेष्टुरेन्ट र घरदेखि संसद् भवनसम्म नक्कली चिकित्सकबारे चियोचर्चा चलिराखेको छ । हुन पनि रोग लागेपछि त्यसको उपचार पाउनु सबैको चाहना हुन्छ नै । जीवनको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जन्म लिनासाथ उसले बाँच्नुपर्छ र कुनै रोगबाट अकालमा मर्नु हुँदैन । त्..
कोइराला परिवारको विरासत : ८० वर्षमा समेत लीलाको सक्रिय राजनीति
लीला कोइराला काँग्रेस नेतृ हुन् । कोइरालाका श्रीमान् सरोज कोइरालाको २०३० मा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरेको थियो । २०१५ का सांसद, जनकपुरका लोकप्रिय नेता कोइरालाको हत्यापछि उनको सपना पूरा गर्न राजनीतिमा होमिएकी लीला ८० वर्षकी भइन् । पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएकी उनी अहिले सांसद छिन् । पाको उमेरमा पनि सक्रिय र..